ဒေါက်တာ ပြည့်ဖြိုးနိုင် အဖမ်းခံရစဉ် (ဓါတ်ပုံ - ဒေါက်တာ ဖြူလဲ့သူ)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တာကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ Civil Disobedience Movement လို့ခေါ်တဲ့ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲမှုနဲ့ အင်္ဂါပူမြို့နယ်အတွင်းက တိုက်နယ် ဆေးရုံအုပ်တဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ပြည့်ဖြိုးအောင်ကို အာဏာပိုင်တွေက မနေ့ညက ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဖြူလဲ့သူက ပြောပါတယ်။ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မဖြူလဲ့သူ။ ။ ကျမနာမည်က ဒေါက်တာ ဖြူလဲ့သူပါရှင်။ ပထမတော့ သူက CDM လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာ သူငယ်ချင်း ပေါင်းအဖော်တွေကိုလည်း CDM လုပ်ဖို့ တော့ ပြောတာပေါ့။ အဲဒါကို နယ်မှာလည်း သူပြေလို့ ဆိုပြီး တမြို့ နယ်လုံးက CDM တွေလုပ်ကြတယ်။ လုပ်ပြီးတော့ ဒီနေ့ ကျတော့ မြို့ နယ်က ဆန္ဒပြကြမယ်ဆိုပြီးတော့ ဆရာမတွေရော၊ တမြို့ နယ်လုံးပေါ့နော်။ တမြို့နယ်လုံး ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ ရှိရင် အယောက် ၁၀၀ လောက်ရှိတယ်။ အဲဒါ သူတို့ ဆန္ဒပြကြတော့၊ ဆရာကကျတော့ ဦးဆောင်နိုင်မှာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ငါ့ကလေးတွေကို ထိန်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ ၀န်ထမ်းဝတ်စုံတောင် မ၀တ်ဘဲနဲ့ သူက လိုက်ထိန်းတယ်ပေါ့။ သူတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး။ ကျန်တဲ့ ဆရာဝန် ၃ ယောက်လည်းပါတယ်။ အဲဒါ လိုက်ထိန်းတယ်။ လိုက်ထိန်းတဲ့ဟာကို ညနေ ၄ နာရီလောက်မှာ ကျမတို့ က ဆေးခန်းနဲ့ အိမ်နဲ့ တွဲထားတယ်ဆိုတော့ ဆေးခန်းမှာ လူနာကြည့်နေတယ်။ လူနာက ခေါင်းကွဲတယ်ဆိုတော့ အဲဒီခေါင်းကွဲတဲ့ လူနာကို ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ စခန်းမှုးက အရပ်ဝတ်နဲ့ ရောက်လာတယ်။ အရပ်ဝတ်နဲ့ ရောက်လာပြီးတော့ ဆရာ့ကို အထက်လူကြီးတွေက စကားပြောချင်လို့ တဲ့။ ဆရာက စကားပြောချင်လို့ ရှိရင် ကျနော့ဆီကိုလာပြော။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ။ မလိုက်ဘူးဆိုပြီးပြောတယ်။ မလိုက်လို့ မရဘူး။ ပြောစရာရှိတယ်ဆိုပြီးတာ့ အဲဒါမလိုက်ဘူးဆိုပေမယ့် အတင်းဆွဲခေါ်သွားတယ်။ ကျမမှာ Video file တွေရှိတယ်။ ကျမမှာ CCTV အိမ်မှာ တပ်ထားတယ်လေ။ အဲဒါ အတင်း ဆွဲခေါ်သွားတယ်။
လက်နက်ကိုင်တွေလည်းပါတယ်ရှင့်။ လက်နက်ကိုင် ရဲ တွေက လေးငါးယောက်ပါတယ်။ ခေါ်သွားပြီးတော့ အမှန်တကယ်ဆို ကျမတို မယ်ဇလီကုန်း ရဲစခန်းမှာဘဲ ထားရမှာပေါ့နော်။ သူတို့ ဘာပုဒ်မနဲ့ ဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်း မပြောဘူး။ ဟို ရပ်ကွက်လူကြီးတွေလည်း မပါပဲနဲ့။ ရဲတွေက လာတဲ့ခါကျတော့လည်း ရဲကားနဲ့ လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပုဂ္ဂလိကကားတစီးကို ငှားပြီးတော့ လာတယ်။ လူတွေကလည်း အရပ်ဝတ်နဲ့ လာပြီးတော့ အဲဒီ ဟို…. ရဲ ၅ ယောက်ကတော့။ သေနက်ကိုင်တဲ့ ရဲ ၅ ယောက်ကတော့ ရဲ အ၀တ်အစားနဲ့ပေါ့။ စခန်းမှူးက အရပ်ဝတ်နဲ့ လာတယ်။ ကျမတို့ ကျတော့ တိုက်နယ်မှာ နေတာလေ။ ရွာလိုမျိူးပေါ့ အဲဒါ မြို့ နယ်ရဲစခန်းကိုများသွားသလားလို့ ကျမတို့ က လိုက်သွားတယ်။ လိုက်သွားတော့လဲ မြို့ နယ်ရဲ့စခန်းမှာ တွေ့ တဲ့လူတွေကတော့ ဆရာ့ ကို ကားချိန်းလိုက်တယ်။ ခုနက ပုဂ္ဂလိက ကားကနေပြီးတော့ ရဲကားသေးသေးကို ချိန်းလိုက်တယ်။ ချိန်းပြီးသွားတော့ ကွင်းကောက် စစ်တပ်ဘက်ကို ထွက်သွားတယ်။ အဲဒါ ကျမတို့ လည်း စစ်တပ်ဘက်ဆိုတော့ လိုက်သွားလို့ လည်း မရဘူး။ စစ်တပ်ထဲမှာလို့ တော့ ထင်နေတယ်ပေါ့နော်။ အခုတော့ ဘယ်နားရောက်နေတယ်လို့ တော့ မသိဘူး။ သေချာသတင်းလည်း မရသေးဘူး။
ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါအခုဖြစ်တာက အင်္ဂပူမှာ နော်။
မဖြူလဲ့သူ။ ။ အင်္ဂပူမြို့ နယ် မယ်ဇလီကုန်းတိုက်နယ်ပါရှင့်။
ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်။ ။ သူ့ ကို ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်လို့ ယူဆသလဲ။ ဆရာက တိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ အခုဖြစ်နေတဲ့ CDM မှာ ပါဝင်လို့ လား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်လို့ များ စိတ်ထဲမှာ သံသယရှိသလဲ ဆရာမအနေနဲ့။
မဖြူလဲ့သူ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ။ သူက CDM မှာ ပါဝင်တယ်။ ပါဝင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ သူက မြို့နဲ့လည်း သူက အရမ်း အပေါင်းအသင်းလဲ ဆန့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ သူ့ စကားကိုဆိုရင် ၀န်ထမ်းတွေကနားထောင်တယ်။ ပြီးရင် သူ့ လို ကျမတို့ မြို့ နယ်မှာ တိုက်နယ်က ၄ ခုရှိတယ်ရှင့်။ ကျန်တဲ့တိုက်နယ်ဆရာဝန်အကုန်လုံးဟာ သူ့ လို CDM တို့ ၊ နိုင်ငံရေးတို့ မှာ တက်ကြွစွာမပါဝင်ဘူး။ မပါဝင်တော့ သူက အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေကို အကုန်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ စည်းရုံးတယ်။ စည်းရုံးလို့ မရတဲ့လူငယ်တွေဆိုလို့ ရှိရင် လူငယ်တွေ သူ့ ရဲ့လက်အောက်က လူငယ်တွေကို စည်းရုံးတယ်။ အဲလိုစည်းရုံးလိုက်တော့ တမြို့ နယ်လုံးက ပါသွားတယ်ရှင့်။ အဲတော့ သူက ဆရာ့ကို ခေါင်ချုပ်လို့ ထားပြီးတော့ ဦးနှိမ်ချင်လို့ ဖမ်းတယ်လို့ ကျမတော့ ထင်တယ်ရှင့်။ ပြီးတော့ ပုဒ်မကတော့ တပ်ချင်တာတပ်မှာပေါ့နော်။
ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒီတော့ ဆရာမကိုရော သူတို့ က ဘာပြောသွားသေးသလဲ။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ သူ့ ကိုမေးမြန်းဖို့ ခေါ်တယ်ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းကိုပြောနေတဲ့စကားပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ကြာမယ်တို့ ၊ အ၀တ်အစားတွေ ထည့်သွားတို့ ၊ တချို့ ဆို အ၀တ်အစားထည့်ခိုင်းတာတို့ ရှိတယ်လေ။ အဲလိုဆို သူတို့ ဘက်က ဘာများပြောတာရှိသေးလဲ ။ ဖမ်းတဲ့ အချိန်မှာလေ။
မဖြူလဲ့သူ။ ။ ပြီးရင်ပြန်ပို့ ပေးမယ်လို့ ပြောပြီးတော့ အင်္ကျီအ၀တ်အစားလဲ မထည့်ခိုင်းဘူးရှင့်။ ပြန်ပို့ ပေးမယ်လို့ အဲဒီ ရဲ သေးသေးလေးကတော့ ပြောတယ်။ ဆရာမ စိတ်မပူနဲ့ ပြန်ပို့ ပေးမယ်။ ဒီအတိုင်းပြန်ပို့ ပေးမယ် လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါ ပြီးတော့ ဒီရာသီက ကျမတို့ ဘက်မှာအေးနေတယ် ။ ပြီးတော့ စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းနည်းနည်းကြားတော့ စစ်တပ်ထဲကလူတွေကို မေးကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ က အဲဒါဆို စစ်တပ်ကိုလာမပို့ နဲ့ ။ ရဲစခန်းကိုသွားပို့ ဆိုတော့ ။ ကျမက အင်္ကျီအ၀တ်အစားတွေကို ရဲစခန်းကို ပို့ ပေးလိုက်တယ်ရှင့်။
ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်။ ။ အမတို့ အင်္ဂပူနယ်မှာဆိုလို့ ရှိရင် တခြားအဖမ်းခံရတဲ့လူတွေကိုရော ကြားမိသေးလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဆရာက ပထမဦးဆုံးအဖမ်းခံရတာလား။ သူ့ အရင် အဖမ်းခံရတဲ့လူတွေရော ရှိသေးလား။
မဖြူလဲ့သူ။ ။ မရှိပါဘူး။ ဆရာက ပထမဦးဆုံးအဖမ်းခံရတာပါ။
ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်။ ။ သြော် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့။ အခုဒါဆိုလို့ ရှိရင် တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ အပြားမှာ ကြားနေရတာတော့၊ ဆရာမလည်းကြားမှာပေါ့၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာပေါ့၊ အခုပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက် ၃ ရက်အတွင်းမှာ သူတို့ ညဘက် တွေမှာ လိုက်လိုက်ပြီးတော့ လူတွေကို ဖမ်းတယ်လေ။ အစပိုင်းကဆိုလို့ ရှိရင် NLD က တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ၊ ၀န်ကြီးချုပ်တွေအပါအ၀င်ပေါ့၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ ပြည်နုယ်ဝန်ကြီးတွေ အဲလိုလူမျိုးတွေဖမ်းတယ်။ နောက် မနေ့ ကဆိုလို့ ရှိရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို ဖမ်းတယ်။ ဒီနေ့ ဆိုရင် ကျနော်တို့ ကြားရတာက အသစ်အနေနဲ့ ထပ်ပြီးတိုးလာတာက ဒီ CDM မှာ ပါတဲ့လူတွေပေါ့။ ဒီ အကြမ်းမဖက် လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့သူတွေ၊ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဦးဆောင်တဲ့သူတွေကို ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေက ဖြစ်လာတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ဖမ်းတဲ့ နယ်က ကျယ်လာတယ်ပေါ့ ။ ဆိုတော့ အဲလို ဖမ်းတဲ့ အပေါ်မှာရော ဆရာမအနေနဲ့ကိုယ့်အမျိူးသား အပါအ၀င်ပေါ့နော်၊ တခြားလူတွေအဖမ်းခံနေရတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ အဲဒီဟာတွေအပေါ်မှာ ဘာများပြောချင်လဲ ခင်ဗျ။
မဖြူလဲ့သူ။ ။ ဒါက သူတို့ နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ပြီးတော့ လူတွေအားလုံးကို ဖမ်းနေတာ မတရားဘူးလို့ ခံစားရတယ်ရှင့်။ ဒီလောက် ပြည်သူတွေကိုလည်း အကျိူးပြုပေးပြီးတော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ လုပ်ပေးနေတာတောင်မှပဲ မကြည့်ပဲနဲ့။ ဘာပြစ်မှုမှလည်း လုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ဖမ်းတယ်ရှင့်။ နိုင်ငံကောင်းကျိူးအတွက်ပဲ မဟုတ်လား၊ ဒီ CDM လုပ်ပေးနေတာ။ အဲဒါ သူတို့ ကို အရမ်းပဲ ရွံလည်းရွံတယ်။ မုန်းလည်း မုန်းတယ်ရှင့်။
ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဒေါက်တာ ပြည့်ဖြိုးအောင် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဖြူလဲ့သူကို ဆက်သွယ်ခဲ့တာပါ။
အာဏာသိမျးမှုကနျ့ကှကျတဲ့ တိုကျနယျဆေးရုံအုပျ အဖမျးခံရ
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈတပျက အာဏာသိမျးလိုကျတာကို ဆနျ့ကငျြ ကနျ့ကှကျတဲ့အနနေဲ့ Civil Disobedience Movement လို့ချေါတဲ့ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျးမပွုရေး လှုပျရှားမှုတှကေို ဦးဆောငျလုပျကိုငျတယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲမှုနဲ့ အင်ျဂါပူမွို့နယျအတှငျးက တိုကျနယျ ဆေးရုံအုပျတဦးဖွဈသူ ဒေါကျတာ ပွညျ့ဖွိုးအောငျကို အာဏာပိုငျတှကေ မနညေ့က ဖမျးဆီးသှားခဲ့ကွောငျး ဇနီးဖွဈသူ ဒေါကျတာ ဖွူလဲ့သူက ပွောပါတယျ။ ကိုဇျောဝငျးလှိုငျက ဆကျသှယျ မေးမွနျးထားပါတယျ။
မဖွူလဲ့သူ။ ။ ကမြနာမညျက ဒေါကျတာ ဖွူလဲ့သူပါရှငျ။ ပထမတော့ သူက CDM လုပျတဲ့ဟာတှမှော သူငယျခငျြး ပေါငျးအဖျောတှကေိုလညျး CDM လုပျဖို့တော့ ပွောတာပေါ့။ အဲဒါကို နယျမှာလညျး သူပွလေို့ဆိုပွီး တမွို့နယျလုံးက CDM တှလေုပျကွတယျ။ လုပျပွီးတော့ ဒီနကေ့တြော့ မွို့နယျက ဆန်ဒပွကွမယျဆိုပွီးတော့ ဆရာမတှရေော၊ တမွို့နယျလုံးပေါ့နျော။ တမွို့နယျလုံး ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှဆေိုလို့ရှိရငျ အယောကျ ၁၀၀ လောကျရှိတယျ။ အဲဒါ သူတို့ဆန်ဒပွကွတော့၊ ဆရာကကတြော့ ဦးဆောငျနိုငျမှာတော့ မဟုတျဘူးပေါ့။ ငါ့ကလေးတှကေို ထိနျးရမယျဆိုပွီးတော့ ဝနျထမျးဝတျစုံတောငျ မဝတျဘဲနဲ့သူက လိုကျထိနျးတယျပေါ့။ သူတယောကျထဲမဟုတျဘူး။ ကနျြတဲ့ ဆရာဝနျ ၃ ယောကျလညျးပါတယျ။ အဲဒါ လိုကျထိနျးတယျ။ လိုကျထိနျးတဲ့ဟာကို ညနေ ၄ နာရီလောကျမှာ ကမြတို့က ဆေးခနျးနဲ့အိမျနဲ့တှဲထားတယျဆိုတော့ ဆေးခနျးမှာ လူနာကွညျ့နတေယျ။ လူနာက ခေါငျးကှဲတယျဆိုတော့ အဲဒီခေါငျးကှဲတဲ့ လူနာကို ခြုပျနတေဲ့အခြိနျမှာ စခနျးမှုးက အရပျဝတျနဲ့ရောကျလာတယျ။ အရပျဝတျနဲ့ရောကျလာပွီးတော့ ဆရာ့ကို အထကျလူကွီးတှကေ စကားပွောခငျြလို့တဲ့။ ဆရာက စကားပွောခငျြလို့ရှိရငျ ကနြော့ဆီကိုလာပွော။ ဘာဖွဈလို့လဲ။ မလိုကျဘူးဆိုပွီးပွောတယျ။ မလိုကျလို့မရဘူး။ ပွောစရာရှိတယျဆိုပွီးတာ့ အဲဒါမလိုကျဘူးဆိုပမေယျ့ အတငျးဆှဲချေါသှားတယျ။ ကမြမှာ Video file တှရှေိတယျ။ ကမြမှာ CCTV အိမျမှာ တပျထားတယျလေ။ အဲဒါ အတငျး ဆှဲချေါသှားတယျ။
လကျနကျကိုငျတှလေညျးပါတယျရှငျ့။ လကျနကျကိုငျ ရဲ တှကေ လေးငါးယောကျပါတယျ။ ချေါသှားပွီးတော့ အမှနျတကယျဆို ကမြတို မယျဇလီကုနျး ရဲစခနျးမှာဘဲ ထားရမှာပေါ့နျော။ သူတို့ ဘာပုဒျမနဲ့ဖမျးတယျဆိုတာလညျး မပွောဘူး။ ဟို ရပျကှကျလူကွီးတှလေညျး မပါပဲနဲ့။ ရဲတှကေ လာတဲ့ခါကတြော့လညျး ရဲကားနဲ့လာတာမဟုတျပဲနဲ့ ပုဂ်ဂလိကကားတစီးကို ငှားပွီးတော့ လာတယျ။ လူတှကေလညျး အရပျဝတျနဲ့လာပွီးတော့ အဲဒီ ဟို…. ရဲ ၅ ယောကျကတော့။ သနေကျကိုငျတဲ့ ရဲ ၅ ယောကျကတော့ ရဲ အဝတျအစားနဲ့ပေါ့။ စခနျးမှူးက အရပျဝတျနဲ့လာတယျ။ ကမြတို့ကတြော့ တိုကျနယျမှာ နတောလေ။ ရှာလိုမြိူးပေါ့ အဲဒါ မွို့နယျရဲစခနျးကိုမြားသှားသလားလို့ကမြတို့က လိုကျသှားတယျ။ လိုကျသှားတော့လဲ မွို့နယျရဲ့စခနျးမှာ တှတေဲ့လူတှကေတော့ ဆရာ့ ကို ကားခြိနျးလိုကျတယျ။ ခုနက ပုဂ်ဂလိက ကားကနပွေီးတော့ ရဲကားသေးသေးကို ခြိနျးလိုကျတယျ။ ခြိနျးပွီးသှားတော့ ကှငျးကောကျ စဈတပျဘကျကို ထှကျသှားတယျ။ အဲဒါ ကမြတို့လညျး စဈတပျဘကျဆိုတော့ လိုကျသှားလို့လညျး မရဘူး။ စဈတပျထဲမှာလို့တော့ ထငျနတေယျပေါ့နျော။ အခုတော့ ဘယျနားရောကျနတေယျလို့တော့ မသိဘူး။ သခြောသတငျးလညျး မရသေးဘူး။
ကိုဇျောဝငျးလှိုငျ။ ။ ဟုတျကဲ့၊ ဒါအခုဖွဈတာက အင်ျဂပူမှာ နျော။
မဖွူလဲ့သူ။ ။ အင်ျဂပူမွို့နယျ မယျဇလီကုနျးတိုကျနယျပါရှငျ့။
ကိုဇျောဝငျးလှိုငျ။ ။ သူ့ကို ဘာကွောငျ့ဖမျးတယျလို့ယူဆသလဲ။ ဆရာက တိုကျနယျဆေးရုံမှာ တာဝနျရှိတဲ့ ဝနျထမျးတယောကျအနနေဲ့အခုဖွဈနတေဲ့ CDM မှာ ပါဝငျလို့လား။ ဒါမှမဟုတျရငျ ဘာကွောငျ့ဖမျးတယျလို့မြား စိတျထဲမှာ သံသယရှိသလဲ ဆရာမအနနေဲ့။
မဖွူလဲ့သူ။ ။ ဟုတျကဲ့ ။ သူက CDM မှာ ပါဝငျတယျ။ ပါဝငျပွီးတဲ့ခါကတြော့ သူက မွို့နဲ့လညျး သူက အရမျး အပေါငျးအသငျးလဲ ဆနျ့ပွီးတဲ့အခါကတြော့ သူ့စကားကိုဆိုရငျ ဝနျထမျးတှကေနားထောငျတယျ။ ပွီးရငျ သူ့လို ကမြတို့မွို့နယျမှာ တိုကျနယျက ၄ ခုရှိတယျရှငျ့။ ကနျြတဲ့တိုကျနယျဆရာဝနျအကုနျလုံးဟာ သူ့လို CDM တို့၊ နိုငျငံရေးတို့မှာ တကျကွှစှာမပါဝငျဘူး။ မပါဝငျတော့ သူက အဲဒီသူငယျခငျြးတှကေို အကုနျဖုနျးဆကျပွီးတော့ စညျးရုံးတယျ။ စညျးရုံးလို့မရတဲ့လူငယျတှဆေိုလို့ရှိရငျ လူငယျတှေ သူ့ရဲ့လကျအောကျက လူငယျတှကေို စညျးရုံးတယျ။ အဲလိုစညျးရုံးလိုကျတော့ တမွို့နယျလုံးက ပါသှားတယျရှငျ့။ အဲတော့ သူက ဆရာ့ကို ခေါငျခြုပျလို့ထားပွီးတော့ ဦးနှိမျခငျြလို့ဖမျးတယျလို့ကမြတော့ ထငျတယျရှငျ့။ ပွီးတော့ ပုဒျမကတော့ တပျခငျြတာတပျမှာပေါ့နျော။
ကိုဇျောဝငျးလှိုငျ။ ။ ဟုတျကဲ့။ အဲဒီတော့ ဆရာမကိုရော သူတို့က ဘာပွောသှားသေးသလဲ။ ဆိုလိုခငျြတာကတော့ သူ့ကိုမေးမွနျးဖို့ချေါတယျဆိုတာကတော့ လူတိုငျးကိုပွောနတေဲ့စကားပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလောကျကွာမယျတို့၊ အဝတျအစားတှေ ထညျ့သှားတို့၊ တခြို့ဆို အဝတျအစားထညျ့ခိုငျးတာတို့ရှိတယျလေ။ အဲလိုဆို သူတို့ဘကျက ဘာမြားပွောတာရှိသေးလဲ ။ ဖမျးတဲ့ အခြိနျမှာလေ။
မဖွူလဲ့သူ။ ။ ပွီးရငျပွနျပို့ပေးမယျလို့ပွောပွီးတော့ အင်ျကြီအဝတျအစားလဲ မထညျ့ခိုငျးဘူးရှငျ့။ ပွနျပို့ပေးမယျလို့အဲဒီ ရဲ သေးသေးလေးကတော့ ပွောတယျ။ ဆရာမ စိတျမပူနဲ့ပွနျပို့ပေးမယျ။ ဒီအတိုငျးပွနျပို့ပေးမယျ လို့ပွောတယျ။ အဲဒါ ပွီးတော့ ဒီရာသီက ကမြတို့ဘကျမှာအေးနတေယျ ။ ပွီးတော့ စဈတပျထဲမှာရှိနတေယျဆိုပွီးသတငျးနညျးနညျးကွားတော့ စဈတပျထဲကလူတှကေို မေးကွညျ့လိုကျတော့ သူတို့က အဲဒါဆို စဈတပျကိုလာမပို့နဲ့။ ရဲစခနျးကိုသှားပို့ဆိုတော့ ။ ကမြက အင်ျကြီအဝတျအစားတှကေို ရဲစခနျးကို ပို့ပေးလိုကျတယျရှငျ့။
ကိုဇျောဝငျးလှိုငျ။ ။ အမတို့အင်ျဂပူနယျမှာဆိုလို့ရှိရငျ တခွားအဖမျးခံရတဲ့လူတှကေိုရော ကွားမိသေးလား။ ဒါမှမဟုတျရငျ ဆရာက ပထမဦးဆုံးအဖမျးခံရတာလား။ သူ့အရငျ အဖမျးခံရတဲ့လူတှရေော ရှိသေးလား။
မဖွူလဲ့သူ။ ။ မရှိပါဘူး။ ဆရာက ပထမဦးဆုံးအဖမျးခံရတာပါ။
ကိုဇျောဝငျးလှိုငျ။ ။ သွျော ဟုတျကဲ့ ဟုတျကဲ့။ အခုဒါဆိုလို့ရှိရငျ တနိုငျငံလုံးအနှံ့အပွားမှာ ကွားနရေတာတော့၊ ဆရာမလညျးကွားမှာပေါ့၊ ဆိုရှယျမီဒီယာတှပေျေါမှာပေါ့၊ အခုပွီးခဲ့တဲ့ ၂ ရကျ ၃ ရကျအတှငျးမှာ သူတို့ညဘကျ တှမှော လိုကျလိုကျပွီးတော့ လူတှကေို ဖမျးတယျလေ။ အစပိုငျးကဆိုလို့ရှိရငျ NLD က တာဝနျရှိတဲ့သူတှေ၊ ဝနျကွီးခြုပျတှအေပါအဝငျပေါ့၊ လှတျတျောအမတျတှေ၊ ပွညျနုယျဝနျကွီးတှေ အဲလိုလူမြိုးတှဖေမျးတယျ။ နောကျ မနကေ့ဆိုလို့ရှိရငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှာ တာဝနျရှိတဲ့သူတှကေို ဖမျးတယျ။ ဒီနဆေို့ရငျ ကနြျောတို့ကွားရတာက အသဈအနနေဲ့ ထပျပွီးတိုးလာတာက ဒီ CDM မှာ ပါတဲ့လူတှပေေါ့။ ဒီ အကွမျးမဖကျ လူထုလှုပျရှားမှုမှာ ပူးပေါငျးပါဝငျတဲ့သူတှေ၊ အဲဒီလှုပျရှားမှုတှကေို ဦးဆောငျတဲ့သူတှကေို ဖမျးတယျဆိုတဲ့သတငျးတှကေ ဖွဈလာတယျ။ တဖွညျးဖွညျး ဖမျးတဲ့ နယျက ကယျြလာတယျပေါ့ ။ ဆိုတော့ အဲလို ဖမျးတဲ့ အပျေါမှာရော ဆရာမအနနေဲ့ ကိုယျ့အမြိူးသား အပါအဝငျပေါ့နျော၊ တခွားလူတှအေဖမျးခံနရေတဲ့ ကိစ်စတှေ၊ အဲဒီဟာတှအေပျေါမှာ ဘာမြားပွောခငျြလဲ ခငျဗြ။
မဖွူလဲ့သူ။ ။ ဒါက သူတို့နိုငျထကျစီးနငျးလုပျပွီးတော့ လူတှအေားလုံးကို ဖမျးနတော မတရားဘူးလို့ခံစားရတယျရှငျ့။ ဒီလောကျ ပွညျသူတှကေိုလညျး အကြိူးပွုပေးပွီးတော့ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျပဲ လုပျပေးနတောတောငျမှပဲ မကွညျ့ပဲနဲ့။ ဘာပွဈမှုမှလညျး လုပျထားတာမဟုတျပဲနဲ့ဖမျးတယျရှငျ့။ နိုငျငံကောငျးကြိူးအတှကျပဲ မဟုတျလား၊ ဒီ CDM လုပျပေးနတော။ အဲဒါ သူတို့ကို အရမျးပဲ ရှံလညျးရှံတယျ။ မုနျးလညျး မုနျးတယျရှငျ့။
ကိုဇျောဝငျးလှိုငျက ဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ ဒေါကျတာ ပွညျ့ဖွိုးအောငျ ဇနီးဖွဈသူ ဒေါကျတာ ဖွူလဲ့သူကို ဆကျသှယျခဲ့တာပါ။